မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ကြက်တောင် အားကစားမယ် သက်ထားသူဇာ တစ်လအတွင်း ပြိုင်ပွဲနှစ်ခုတွင် ၃၂ ဦးအဆ?? - Yangon Media Group
မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ကြက်တောင်အားကစားမယ် သက်ထားသူဇာသည် ဧပြီလအတွင်း ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့် ပြိုင်ပွဲနှစ်ခုတွင် ၃၂ ဦးအဆင့်ဖြင့် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ကာ ထွက်ခဲ့ရသည်။
ဗီယက်နမ် International Challenge ကြက်တောင်ရိုက်ပြိုင်ပွဲကို ဧပြီ ၉ရက်မှ၁၄ရက်အထိကျင်းပခဲ့ပြီး မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ကြက်တောင် အားကစားမယ် သက်ထားသူဇာသည် အမျိုးသမီးတစ်ဦးချင်း ပွဲစဉ်တွင် ထိုင်းကစားသမား Chananchida Jucharoen ကို ၂၁-၁၂၊ ၁၆- ၂၁၊ ၂၁-၂၃ဖြင့် တစ်ပွဲနိုင်၊ နှစ်ပွဲရှုံးနိမ့်ခဲ့သဖြင့် ၃၂ဦးအဆင့်မှာပင် ပြိုင်ပွဲမှ ထွက်ခဲ့ရသည်။
ထို့အတူ တရုတ်နိုင်ငံ ဝူဟန် မြို့တွင် ဧပြီ၂၃ရက်မှ၂၈ရက်အထိ ကျင်းပမည့် ၂ဝ၁၉ခုနှစ် အာရှကြက်တောင်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲတွင်လည်း သက်ထားသူဇာသည် အမျိုးသမီးတစ်ဦးချင်းပွဲစဉ်၌ ၃၂သင်းအဆင့်မှ စတင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့သော်လည်း ကမ္ဘာ့အဆင့် ၁၉ ရှိ ဂျပန် ကစားသမား Aya Ohori ကို ၂၁-၇၊ ၂၁-၁၂ မှတ်ဖြင့် နှစ်ပွဲပြတ် ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။ မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ကြက် တောင်အားကစားမယ် သက်ထားသူဇာသည် ကမ္ဘာ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ၁၃၂ အထိရှိလာခဲ့သော်လည်း ဗီယက်နမ် International Challenge ကြက်တောင်ရိုက်ပြိုင်ပွဲအပြီးနောက် ကမ္ဘာအဆင့် ၁၄၁အထိ ကျင်းဆင်းခဲ့သည်။
မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ကြက် တောင်အားကစားမယ် သက်ထားသူဇာသည် ၂ဝ၂ဝ တိုကျိုအိုလံပစ် လက်ရည်စစ်ပွဲအောင်မြင်ရန် ရည်မှန်းချက်ထား ကြိုးစားနေသူဖြစ်သည်။ ၂ဝ၂ဝ တိုကျိုအိုလံပစ် ပြိုင်ပွဲမတိုင်မီ တစ်နှစ်တာကျန်ရှိနေချိန်အတွင်း နိုင်ငံတကာကြက် တောင်ရိုက်စီးရီးပြိုင်ပွဲ၊ ဖိလစ်ပိုင်ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲတို့တွင် အောင်မြင်မှု ရရှိရန် လိုအပ်နေသည်။ ၂ဝ၂ဝ တိုကျိုအိုလံ ပစ်ကြက်တောင်ရိုက်ပြိုင်ပွဲအတွက် လက်ရည်စစ်ပွဲကို ကမ္ဘာ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ၁ဝဝ အတွင်း ဝင်ရောက်မှသာ ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မလေးရှား 1 MDB ဘဏ်၏ ငွေကြေးအရှုပ်တော်ပုံ၌ မိမိပါဝင်ခဲ့သည်ဟု အမေရိကန် တရားရေးဌာန အရာရှိဟောင်းက ??
စည်ပင်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းများကို မြို့နယ်အချို့တွင် စတင်ကောက်ယူ
ဖဲရှုံး၍ သုံးလသားအရွယ် သားဖြစ်သူအား တရုတ်ယွမ်ငွေ ငါးထောင်ဖြင့် မိခင်အရင်းက ရောင်းစားခဲ့မှု ??